Hove mukati memhuri dzeWrestling - Wwe
8 Mhuri Yekurwira Inobatanidzwa mu 'Mhuri Mhirizhonga'
Mhuri chikamu chakakura chehupenyu hwemunhu. Hove dzinogona kumuka mukurwa, sevanyanzvi vewrestling vanowanzo kuve munzira, izvo zvisingasiye nguva yakawanda kumhuri dzavo. Mune zvimwe zviitiko zvakadaro, mhuri dzavo dziri mubhizimusi rekurwa, uye zvinogona kuita kune dzimwe nyaya dzinogombedzera.
Ngatizvitarisei; munhu wese ane mutambo wemhuri, asi havazi vese vanohuda pachena. Munyika yewrestling, kana mhuri yako ichibatanidzwa, dzimwe nguva inotamba kuita yewrestling's-screen screen.
Fans vanoda kukwanisa kuenderana nenyeredzi uye vanhu vanogona kugara vachienderana nemutambo wemhuri. Pakave paine nyaya dzakawanda mumakwikwi ehunyanzvi anotenderera pamhuri dzemakakatanwa.
ndoita sei kuti mazuva afambe nekuchimbidza
Mazhinji eaya emanyaya enhau anongosanganisira e-pachiratidziro nhengo dzemhuri, kwete zvine mutsigo mhuri yenyenyedzi. Semuenzaniso, Kane naThe Undertaker havazi hama dzekubereka, asi ndizvo zviri muWWE Universe.
Kune mhuri dzakawanda dzinozivikanwa dzekurwa mubhizinesi. Dzimwe dzeidzi mhuri dzavemo kwemakore. Semuenzaniso, Dombo rinobva kumhuri yeAnona'i. Parizvino WWE Universal Champion Roman Reigns zvakare iri chikamu chemhuri iyoyo.
Usos, Nia Jax, Tamina; nhengo dzese dzazvino dzeWWE roster dzinowira muropa iri.
Kutonga kwevaRoma uye maUsos parizvino vari munhau yenyaya neThe Mysterios. Uyu muenzaniso wakakwana wemhuri mbiri dzakasiyana dzemutsimba dzakatarisana mumhete.
Heino runyorwa rweakakurumbira emhuri makakatanwa akaitika mukati mekurwa nhoroondo. Chinyorwa ichi hachina kunyorwa kwete chete chemhuri vs dzimwe mhuri asiwo kusagadzikana mukati memhuri imwechete.
# 8. Vanobira Vanin'ina Vanokakavara
Rick naScott Steiner
Rick naScott Steiner ndivo vaviri vevanonyanya kuzivikanwa uye vakakurisa vechokwadi-hupenyu hama mune yehunyanzvi mutsimba. Vakatanga kukwikwidzana pamwe mukupera kwema1980 uye kubvira vatohwina makwikwi mazhinji.
Ivo vaitonga mateki emapoka emapoka mukati mese kutanga kusvika pakati pemakumi mapfumbamwe, asi zvinhu zvakakurumidza kuchinjira ivo mukunopera kwema90s panguva yavo muWCW.
hukama hunofanira kuva hwega rini
Hama dzaSteiner dzaive nerunako rwakanaka naStevie Ray naBooker T weHarlem Heat (vaizotorwa sevanokudzwa pane izvi nekuti vaive nehukama hwemhuri hupfupi)
Tumira kupokana uku, Scott Steiner anokuvara uye obuda kwenguva yakati rebei. Paakadzoka aive nechitarisiko chakasiyana zvakanyanya. Akagura bvudzi rake, aine mbudzi, uye aive akatokura kupfuura zvaaiva pakutanga.
Sezvo hama mbiri idzi dzaipokana naKevin Nash naScott Hall weNWO, zvinhu zvakatanga kuchinja.
Scott anga achirwara nemukoma wake uye airamba kuisa Rick mukati, kazhinji achishanda akazara machisi ega. Rick aibva ashungurudzika kuti Scott aisazomurega achibatsira mumutambo.
Panguva yemutambo wavo naNash naHoro paSuperBrawl VIII, Scott Steiner aizochinja hama yake obatana neNew World Order. Scott akarwisa Rick, achipedzisa timu yavo zvachose.
ndingaudza sei kana ndichiyevedza
Husiku hwakatevera akachinja chitarisiko chake ndokuva Big Pappa Pump, achitamba bvudzi rake rakachenuruka uye mbudzi. Aizozvibatanidza nenhengo yeNWO Buff Bagwell , waakange aine ruvengo rukuru naye.
Izvi zvaizogumbura Rick Steiner zvakatonyanya uye vaviri vacho vaizozvirwisa kakawanda musingle uye tag timu makwikwi. Rick haana kumboita senge achapora kubva pakurambana.
Scott aizoenderera mberi nekuve akabudirira kwazvo singles anomhanya mune akawanda akasiyana kukwidziridzwa mushure mekudonha kweWCW. Zvichakadaro, Rick aikwikwidza mumatanho akasiyanasiyana asi achizopedzisira aenda kure, achingoita kamwe-kamwe.
Iyo Steiner Hama kupatsanurwa kwaityisa munguva yayo, asi ikozvino, zvadzika munhoroondo semhuri huru yekukakavara mukurwa. Ivo vaviri vakabatana pamwechete mukusimudzira kushoma apo Scott aida waakabata timu yetimu asi feud yavo yaiita kunge ndiwo mugumo wenhoroondo tag tag timu inomhanya.
kuregerera kusavimbika mafambiro ekunyepera apfuura
sei kuudza kana mukomana ari pabasa achifarira
ndoziva sei kuti ndakanaka
ndinopomerwa mhosva yezvose zviri muhukama hwangu
sei kuziva kana wako kudanana